Jaaliyadda Koonfur Afrika oo xaflad taageero ah u sameeyey Madaxweyne Farmaajo (Daawo Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Jaaliyadda Koonfur Afrika oo xaflad taageero ah u sameeyey Madaxweyne Farmaajo (Daawo Sawiro)
Xaflad balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ee ku dhaqan magaalada Cape town ayaa lagu taageeray dowlada cusub ee Soomaaliya.
Xafladani oo si gaar ah ay loogu taageeray Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa kasoo qeyb galay dhamaan bulshada Soomaaliyed qeybaheeda kala duwan Ganacsato, Culumo, Odoyaal, iyo Haweenba.
Waxaana inteeda badan intii ay xafladu socotay laga sheegay goobta wax qabadkii Madaxweyne farmaajo kahor guushiisa talada dalka intii uu ahaa Ra’isul wasaaraha Soomaaliya taasuu ku kasbaday quluubta shacabka Soomaaliyeed
Goobta waxaa ka hadlay Masuuliyiin fara badan oo uu kamid ah ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ah ganacsade ku dhaqan Koonfur Afrika ahna saaxiib si gaar ah ugu dhaw Farmaajo ayaa in badan ka hadlay hadafka fog ee laga filan karo inta uu hayo talada wadanka.
Sidoo kale Safaarada Soomaaliya ee koonfur afrika ayaa iyaduna kamid ahyd martidii goobta ka hadashay waxaana uu ka dhawaajiyey Qunsulka u fadhiya magaalada Cape town in Cabdullaahi Xasan Cali in lama huraan tahay taageerida shacabka loona baahanyahay in la ilaalsho jiritaanka Soomaaliya
ayna muhiim tahay in qof walboo Soomaali ah uu xil iska saaro sidii loogu garab siin lahaa Nabada iyo horumarka dalka Mudane Farmaajo.
Ugu danbeyn waxaa xaflada soo xiray guddiga qaban qaabada xaflada oo iyaguna uga mahad celshay shacabka sida quruxda badan oo ay dareenkooda usoo bandhigeen inkastoo ay u suura galiweysay maqalka codka Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya oo lagu ballansanaa in qadka taleefanka uu uga qeyb galo waqtiga oo xili danbe ahaay.
Nabad Suggida Galmudug iyo ciidan Mareykan ah oo Saldhigyo ka sameysanaya Xeebaha Gobolka Mudug
Madaxweyne Farmaajo oo ka guddoomay waraaqihii aqoonsiga danjiraha Britain.